'अब राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज लक गर्नुपर्छ' - UrjaKhabar 'अब राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज लक गर्नुपर्छ' - UrjaKhabar
‘अब राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज लक गर्नुपर्छ’
काठमाडाैं । उद्योगी एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान जलविद्युत प्रवर्द्धक पनि हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको नेतृत्वसमेत सम्हालिरहेका छन् । लगानी गर्ने निकाय र लगानी हुने क्षेत्र दुवैमा उनको उपस्थिति छ । ऋणदाताका समस्या वा कठिनाई र ऋण ग्रहण गर्नेका पीडा उनले नजिकबाट बुझेका छन् ।
विश्व कोरोना महामारीले थलिएको बेला नेपाल पनि शिथिल बनेको छ । बैंक, उद्योग र जलविद्युत मात्र होइन सिंगो अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यसले दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि सहरमा आकर्षक तलबमा काम गर्नेलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । निम्न बर्गीय समुदायले धमाधम रोजगारी गुमाइरहेको छ । रोजगारीका क्षेत्र बन्द छन् । उता जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु भइरहेको छैन ।
प्रतिकूल परिस्थितिमा ज्यालादारीको दैनिकीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि अर्थतन्त्रको गाडी हाँक्नुपर्ने देखिन्छ । सँगसँगै कोरोनाबाट बच्दै लकडाउनपछि दैनिकी पुरानो अवस्थामा फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ । ऋणदाता, प्रवर्द्धक वा उद्योगी र पूर्वाधार एवं जलविद्युत निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न उतिकै चुनौती देखिन्छ । यिनै विषयमा ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गोल्यानसँग गरेको कुराकानी :
अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रले जनजीवन सजिलो बनाउन कसरी भूमिका खेल्न सक्छ ?
अहिले विश्व नै समस्यामा छ । भूकम्प वा नाकाबन्दीको बेला विश्वले हामीलाई सहयोग गर्यो । तर, आज त्यो अवस्था छैन । हामी आफैंले समस्या समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । विश्व आतंकित भइरहेका बेला कसैले सघाउँछ भनेर बाटो हेर्नु वा आश गर्नुको अर्थ छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जावालालाई केही न केही राहात दिनुपर्छ । बैशाखसम्म ब्याज बुझाउने ऋणीलाई १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । साना ऋणीको हकमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैशाखदेखि १ प्रतिशत ब्याज घटाउने तयारी छ ।
बैंकले आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाएर रकमको जोहो गर्नुपर्छ । र, यस्तो बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय क्षेत्रको पुँजी चलायमान बनाउनुपर्यो । आउँदो ३ देखि ६ महिनाभित्र अहिलेको भन्दा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज घटाउनुपर्छ भन्नेमा बैंकहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
कसरी काम गर्ने भन्नेमा एउटा ‘थिंक ट्यांक’ बनाउँदैछौं । यसले कुन–कुन ठाउँमा मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ वा खर्च घटाउन सकिन्छ ? गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियासँगै कहाँ–कहाँ बैंकहरू आपसमा मिलेर काम गर्न सक्छन् ? यसको खोजी हुन्छ । जे जसरी हुन्छ अहिलेको समयमा साना कर्जावालालाई फाइदा दिनुपर्छ । यसबाट जनजीवन केही सहज हुन सक्छ ।
धेरै निम्न तथा मध्यम–बर्गिय नागरिकले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । त्यो समुदायलाई रोजगारीमा फर्काउन वित्तीय क्षेत्रको पहल के हुनुपर्छ ?
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सहुलियतमा कर्जा दिने नीति ल्याइसकेको छ । कृषिमा फर्किने युवा अझ महिलाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुयित कर्जा (वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा) दिने भनिएको छ ।
आधार ब्याजमा बैंकले २ प्रतिशत नाफा जोड्ने यसो गर्दा ९ प्रतिशतको कर्जा ११ प्रतिशत पुग्छ । यसपछि महिलाको हकमा ६ र पुरुषको हकमा ५ प्रतिशत ब्याज घटाएर ऋण दिने । यसमा कुनै धितो नमाग्ने । कसैले कृषि वा घरेलु व्यवसाय गर्छन् भने तिनलाई यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।
लकडाउन खुल्ने बित्तिकै बैंकहरूले ७ वटै प्रदेशसँग समन्वय गरेर औद्योगिक मेला आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन् । ठूलाका लागि भन्दा साना र घरेलु उद्योग जसले १० देखि १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएर काम गरेका छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ।
यस्ता उद्योगको मेसिनहरू प्रदर्शनीमा राख्ने, यससम्बन्धी सीप त्यही सिकाउने र मेसिन समेत त्यहीँ किन्ने व्यवस्था हुन्छ । उत्पादित सामानका खरिदकर्ता बैंकिङ क्षेत्रकै ग्राहक हुनेछन् । उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन गरेर किन्न लगाइनेछ । जसबाट रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना हुनुका साथै जनजीवन सामान्य हुँदै जान्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा वित्तीय संस्थाले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ?
कृषि तथा यससँग जोडिएका क्षेत्रले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । यसमा बैंकले सहुलियतमा लगानी गर्ने योजना बनिसक्यो । यो सँगै कृषि वस्तुको प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगमार्फत निम्न बर्गीय समुदायलाई काम दिन सकिन्छ । सातु, मस्यौरा, पापड, मट्टमासबाट दूध तथा तोफु बनाउने जस्ता सयौं उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।
यी खाद्यवस्तु देशमा उत्पादन गर्न सके विदेशबाट आयात गर्नुपर्दैन । कृषिजन्य आयातका सामानको सूची बनाएर त्यो यहीँ उत्पादन गर्नुपर्यो । उद्योग भन्नासाथ ठूलो आकारको सोचमात्र राख्नु भएन । साना–साना उद्योगले पनि हजारौंलाई काम दिन सक्छन् । निम्न तथा मध्यम बर्गीय समुदायको जीवनस्तर सहज हुन्छ ।
अर्को, कोरोना महामारीले विदेशमा काम गर्न गएका धेरै नेपालीले रोजगार गुमाएका छन् । फर्किन मिल्नेसम्म फर्किसके । यसको असर रेमिट्यान्समा देखिन्छ । अघिल्ला वर्षमा ७–८ अर्ब रुपैयाँ रहेको रेमिट्यान्स आगामी आवमा २–३ अर्बमा झर्न सक्छ । विदेशमा काम गर्ने ५ देखि १५ लाख मान्छे फर्केर आउने निश्चित भइसक्यो ।
यति ठूलो संख्यामा फर्केर आउनेलाई पनि त काम दिनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा १० जनाले १० वटा ठूला उद्योग खोलेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हुनु हुँदैन । यो सम्भव पनि छैन । यसो भनिरहँदा ठूला उद्योग आउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, बैंकर तथा लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट व्यावसायिक कृषि प्रणाली मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मझौला कृषिजन्य उद्योग खोल्नुको विकल्प छैन ।
जब रेमिट्यान्स कम हुन्छ तब हामीसँग आयात गर्ने पुँजी हुँदैन । राजस्व घटिरहेको छ । यी सबै विषय अध्ययन गरेर कृषिजन्य वस्तु देशमै उत्पादन गरेनौं भने समस्या भयावह हुँदै जानेछ । कृषिमा लगानी गर्ने वा व्यावसायिक कृषिमा सहभागी हुने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई २०–२५ प्रतिशतसम्म आरक्षण दिनुपर्यो ।
राज्यले यति गर्ना साथ साना तथा मझौला कृषिजन्य उद्योग खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्नेछ । देशको आवश्यकता र खाँचो हेर्नुपर्यो । ठूला उद्योग आउने हो भने निर्यातमुखी उत्पादनका लागि आउनुपर्यो । नत्र ठूला उद्योगको कुरा मात्र गर्ने र हात बाँधेर बसेर हुँदैन ।
कृषिका अलावा अब लगानीका क्षेत्र कसरी विविधकरण गर्ने ?
सरकारले सुरुमा कृषि, जलविद्युत र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको थियो । अब पर्यटन त एक–दुई वर्ष माथि उठ्न सक्दैन । पर्यटनसँग निर्माणाधीन उद्योग पूरा होलान् नत्र नयाँलाई केही वर्ष थाति राखे हुन्छ । यसमा लगानी गरेर प्रतिफल आउन सक्दैन । बाँकी कृषि र जलविद्युत रहे । पर्यटनको ठाउँमा निर्यातजन्य वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
कृषिमा प्राथमिक अथवा माटोबाट उत्पादन हुने वस्तु, प्रशोधन गरेर निकालिने दोस्रो चरणको उत्पादन र फाइनल जडिबुटीजन्य उत्पादनमा जानुपर्छ । अर्को, अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ने क्षेत्र ऊर्जा हो । जहाँ धेरै लगानी र काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युतमा पनि वातावरण बिग्रेको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्यो, लगानी सम्झौता गर्ने तर निर्माणमा नजाने अवस्था छ । यसरी ३–४ वर्षसम्म आयोजना होल्ड भएर बसेका छन् । यसो हुँदा बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको रकम खर्च भएन । आयोजना पनि बनेन । अब यसो हुनु भएन ।
बैंकहरूले पहिलो प्राथमिकता साना तथा मझौला कृषिजन्य उद्योगलाई दिनुपर्यो । त्यसपछि जलविद्युतमा जानुपर्छ । लगानी गर्दा जुन आयोजना तुरुन्त निर्माणमा जाने अवस्था छ, त्यसमा जानुपर्छ । राम्रा आयोजनाका लागि देशभित्र वा बाहिरबाट पैसा ल्याएर भए पनि लगानी गर्न सक्छौं । विदेशी बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ल्याएको पैसा जलविद्युत वा मेगा आयोजनामा लगाउनुपर्छ ।
आजको दिनमा विदेशी बैंक, दाता वा विकास साझेदार निकायबाट सजिलै सहयोग आउने अवस्था नरहेको बताइसक्नुभयो । आन्तरिक पुँजी निर्माण र परिचालनमा बैंकहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
हामीले आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई केही सल्लाह दिएका छौं । जसलाई कालो धन सेतो बनाउने भनेर चर्चा पनि गरियो । तर, हाम्रो मनसाय चर्चा गरिए जस्तो होइन । जे जति लुकेर बसेको आन्तरिक पुँजी छ, पहिला यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कानुनले छुनु भएन ।
मानौं, महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गरिरहँदा त्यसको स्रोत खोज्नु भएन । आजको दिनमा यो सानो रकम हो । सामान्य किसानसँग पनि यति रकम हुन्छ । सर्वसाधारण, सामान्य व्यापारीसँग भएको रकम सजिलै बैंकमा आओस् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको आँखाबाट हेर्दा विश्वमा चार प्रकारको पुँजीलाई कालो धन मानिएको छ । मानव बेचबिखन, लागुऔषध, हातहतियार खरिद र राजनीतिक स्वार्थसँग सम्बन्धित पुँजी हुनु भएन । यी चारबाहेक जुनसुकै रकम सजिलै बैंकिङ च्यानलमा आउन दिनुपर्यो । यस्तो पुँजी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइयो भने देशभित्रै ठूलो रकम जम्मा हुन सक्छ ।
अर्को, युरोप अमेरिकातिर बसोबास गर्ने नेपालीले राम्रै आम्दानी गरेका छन् । जुन कालो धन होइन । मिहिनेत र पसिनाको कमाइ हो । यस्तो रकम बैंकिङ च्यानलबाट आउन दिनुपर्यो वा उनीहरू आउँदा सजिलै आफ्नो सम्पत्ति लिएर आउने वातावरण हुनुपर्यो । साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) लाई खुकुलो बनाउनुपर्यो ।
विदेशी संस्था वा युरोप अमेरिका बस्ने नेपालीले पैसा ल्याउन चाह्यो भने प्रक्रिया मिलउँदैमा ३ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ । यसो हुनु भएन । ५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको रकम ल्याएर मर्चेन्ट बैंकमार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसमा २–३ वर्ष लकिङ पिरियड राख्नुपर्छ ।
सरकारले ५० लाख डलरसम्म अटो सिस्टम (विदेशी बैंकबाट सोझै यहाँको बैंकमा आउने) गरिदिनुपर्यो । यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्छ । जब आम्दानी फिर्ता लैजाने समय हुन्छ तब यसमा कडाई गरे हुन्छ । यसको मतलब अवैध धन आओस् भन्ने होइन । अब रेमिट्यान्स घट्ने हुँदा यहाँ तुरुन्त पैसा चाहिन्छ । यसैले बैधानिक आम्दानीमा राष्ट्र बैंकले अनेक प्रश्न सोध्नु भएन ।
गैरआवासीय नेपालीसँग पनि पर्याप्त पैसा छ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्छ’ भन्ने डलरले ल्याउन सकेका छैनन् । कम्तीमा १० वर्षसम्मका लागि सरकार लचिलो र सहयोगी हुनुपर्यो । यी उपायमा जान सकियो भने हाम्रो सानो अर्थतन्त्र सजिलै चलायमान हुन्छ । अरू पनि आन्तरिक पुँजी निर्माणका विकल्प छन्, जसलाई हामीले ‘थिंक ट्यांक’मार्फत बाहिर ल्याउन खोजिरहेका छौं ।
हामी नेपाललाई फाइनान्सियल हब बनाउन सक्छौं । दुबही, सिंगापुर जस्ता मुलुक फाइनान्सियल हब बनेका छन् । जस्तो, यहाँ एलसी (प्रतितपत्र) खोली चीनबाट सामान किनेर भारत, बंगलादेश वा जुनसुकै देशमा बेच्नुस् । यसलाई थर्ड कन्ट्री सेल भनिन्छ । जुन सामान नेपालका लागि हुँदैन । यसबीचमा हामी वा व्यापारीले गरेको नाफा नेपालमा आउनुपर्यो । जसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नै हो । बैंकसँग निक्षेप नै भएन भने कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् ।
देशभित्रै लुकेको पैसा वा गाडधन, विदेशमा नेपालीले कमाएको र केही हदसम्म कालो धन कृषि र ऊर्जामा लगानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना छ । यसमा सरकार कति वर्षसम्म लचिलो भइदिए अहिलेको कोरोना महामारी समेत टार्न सकिएला ?
जे जति आउँछ कालो धनलाई सेतो बनाउने नै हो । अहिले हामीले देश जोगाउने कि कालो वा सेतोको बहसमा अल्झिने ? कृषि वा ऊर्जामा यस्तो रकम आयो भने कम्तीमा ५ वर्ष स्रोत नसोधियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र विदेशबाट फर्केर आउने भाइ–बहिनीलाई रोजगार दिन धेरै ठूलो लगानी चाहिन्छ ।
एक पटक पुँजी प्रणालीमा छिर्यो भने दोस्रो वर्षदेखि राज्यलाई कर आइहाल्छ । त्यो बाहिर जाने कुरै हुँदैन । देशलाई केही नोक्सान छैन । सरकारले यसमा नकारात्मक सोच्न जरुरी छैन । यदि, सोचिन्छ भने त्यो कुण्ठित मानसिकता हो ।
हामी अझै ‘दिवास्वप्नामा हराइरहेका छौं’ जस्तो लाग्छ । किनकि, आँखा खुल्नासाथ सबै ठीक हुन्छ भन्ने मानसिकता हटेको छैन । लकडाउन खुलेपछि हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन्छौं भनेर नसोचे हुन्छ । जबसम्म कोरोनाको उपचार पत्ता लाग्दैन तबसम्म हरेक क्षेत्र सचेत, सजग र सावधान भएर काम गर्नुपर्छ ।
हरेक नागरिक डराइ–डराइ हिँड्नुपर्छ । काम गर्नुपर्छ हाम्रो काम गर्ने क्षमता सामान्य अवस्थामा भन्दा आधा हुन्छ । पूर्ण रूपमा काम नगर्दासम्म पुँजी निर्माण हुँदैन । यस्तो बेलामा पुँजी आउँछ र यसले सामान्य नागरिकको दैनिकीदेखि, रोजगारी तथा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ भने नकारात्मक सोच्नुपर्दैन ।
आज जलविद्युत बैंकको लगानीसँग जोडिएको ठूलो क्षेत्र भएको छ । यो क्षेत्र निकै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा बैंक र प्रवद्र्धकबीच कसरी सहकार्य हुन जरुरी छ ?
अहिले हामीसँग सीमित पुँजी छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा हामी आफैंले लगानी गर्न सक्छौं । त्यस्तो आयोजना जुन तुरुन्तै निर्माणमा जाने अवस्थाका छन्, बैंकले यस्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । र, सक्दो ब्याज घटाउनुपर्यो ।
राष्ट्र बैंकमा भएको वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उपयोग गर्ने, हरेक बैंकले सञ्चालन खर्च घटाउने तथा निक्षेपको ब्याज पनि कम गर्ने जस्ता उपायबाट जे जति बचत हुन्छ । त्यो जलविद्युतमा लगानी गर्ने पुँजीको ब्याजमा सहुलियत दिन सकिन्छ ।
अब प्राथमिकता तोकेर लगानीको सूची बनाउनुपर्यो । आजसम्म हरेक क्षेत्र एक्ला–एक्लै हिँडिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) बीच समन्वय तथा सहकार्य प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा तथा जलविद्युतमा कसरी जान सकिन्छ ? इपान वा ऊर्जा उत्पादकहरूले बैंकबाट के खोजिरहेका हुन् ? कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अलग–अलग कुरा गर्नुभन्दा सबै मिलेर जाँदा नै जलविद्युतमा लगानी बढ्छ । राम्रा आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्दा बैंकहरू सुरक्षित हुन्छन् । लगानी समयमै फिर्ता आउँछ । समग्रमा देशको पुँजी उचित ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक, बैंक र प्रवर्द्धक वा उद्योगी मिलेर जलविद्युत क्षेत्रको ब्याज निश्चित विन्दुमा राख्न सक्नुपर्यो । लगानी प्राथमिकताका आधारमा ७–८, ८–१० र १०–१२ प्रतिशतमा ब्याज बर्गीकरण गर्नुपर्छ । सकिन्छ, १० प्रतिशतभित्र सबै क्षेत्रलाई समेटौं । सकिँदैन, १२ प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रको ब्याज हुनु हुँदैन ।
यो परिस्थितिलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्ला ?
राष्ट्र बैंकले अहिले जुन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ त्यो दरिलो छैन । ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्ककर्जा दिने भनेको थियो । कोभिड–१९ को मनन् गरी ६० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने भन्यो तर दिएको १८–२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन । ५० अर्ब अहिलेसम्म पुगेकै छैन । राष्ट्र बैंकले यसलाई ५० बनाओस् वा ६० त्यसको अर्थ भएन ।
अब जलविद्युतका लागि निश्चित ब्याज तोकिदिनुपर्यो । कोरोना अघि ११ प्रतिशतसम्म थियो । अब ७ वा ८ प्रतिशतको बीचमा ल्याउनैपर्छ । राष्ट्र बैंकले मात्र निर्देशन दिनेभन्दा हामी सबैको भूमिका हुनुपर्छ । यसमा उद्योगी, बैंकर वा जलविद्युत प्रवर्द्धक एक ढिक्का हुनुपर्छ । एउटाले एउटा मुद्दा बोकेर हिँडेर निकास निस्किँदैन ।
देश जोगाउँदै हामी स्वाबलम्बीको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैले, राष्ट्र बैंक, बैंक र प्रवर्द्धक वा उद्योगी मिलेर जलविद्युत क्षेत्रको ब्याज निश्चित विन्दुमा राख्न सक्नुपर्यो । लगानी प्राथमिकताका आधारमा ७–८, ८–१० र १०–१२ प्रतिशतमा ब्याज बर्गीकरण गर्नुपर्छ । सकिन्छ, १० प्रतिशतभित्र सबै क्षेत्रलाई समेटौं । सकिँदैन, १२ प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रको ब्याज हुनु हुँदैन ।
यो आज वा लकडाउनको समयका लागि मात्र होइन । कम्तीमा आउने ५ वर्षसम्मका लागि वा हाम्रो अर्थतन्त्र पुरानो अवस्थामा नफर्किँदासम्म हुनुपर्छ । यसका लागि पनि एकीकृत प्रयास हुनुपर्यो ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा बैंकको लगानी खुम्च्याउने खालको सर्कुलर जारी गरेको छ । अब आगामी लगानी योजना जलविद्युतबाट अन्यमा मोडिने भयो नि ?
सुरुमा ऊर्जा र कृषिमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी पुर्याउनुपर्ने भन्ने थियो । पछि, त्यो सीमामा पर्यटन थपियो । अहिले १५ प्रतिशतकै सीमा पुर्याउन अन्य उद्योगलाई समेत जोडिदिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नियम चित्त बुझ्दो छैन । सरकार र सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखिन्छ । सरकारले विद्युत उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर लगानी खुम्च्याउने नीति बनाउनु विडम्बना हो । यो सुधार हुनुपर्छ ।
अहिले करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तिनमा सरकारको प्रभावकारी सहजीकरण छैन । विद्युत उत्पादनको चरणसम्म पुर्याउन कसरी काम गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?
सबै प्रवद्र्धकमा मेरो अनुरोध छ, अहिलेको बेलामा केही कष्ट गर्नुपर्यो । देशको लागि सोचेर पनि निर्माण तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्छ । सरकारले सजिलो बनाइदियो भने काम गरौंला । सरकारले गरिदेला वा सुविधा–सहयोग गर्ला भनेर बस्नु भएन ।
हामी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका हुन्छौं । यसक्रममा हाम्रो स्थानीय प्रशासन वा सरकारसँग एक प्रकारको समझदारी हुन्छ । उनीहरूलाई बुझायो भने बुझ्छन् । सहजीकरण नगर्ने भन्ने हुँदैन । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा लगायत जिल्लामा काम सुरु भइसक्यो । समस्या कामदारको छ, यसमा त सरकारले के गर्न सक्ला र !
सिमेन्ट, डन्डी जस्ता निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पासको व्यवस्था छ । प्रवर्द्धक आफू पनि अग्रसर हुनुपर्यो । हतखुट्टा चलाउनुपर्यो । सरकारले घरमा ल्याएर दिने होइन । म लकडाउनमा बस्छु अरू जेसुकै होस् भन्ने हो भने सरकारलाई गाली मात्र गरेर हुँदैन । नत्र केही जोखिम लिएर पनि आयोजना सुचारु गर्नुपर्यो ।
एक–डेढ वर्ष ढिलै भए पनि निर्माणाधीन आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने निश्चित छ । अब विद्युत खपत भएन भने बैंक तथा प्रवर्द्धकले अर्को समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसको निकास के देख्नुहुन्छ ?
उत्पादन हुनासाथ प्रयोग गर्न प्रसारण लाइन पहिलो पूर्वसर्त हो । विद्युत प्राधिकरणले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले विद्युत खपतको योजना ल्याउनुपर्यो । तीव्र गतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण गर्नुपर्यो । सहरभित्रका जिर्ण अवस्थाका वितरण लाइन स्तरोन्नती नहुँदासम्म घर–घरमा गुणस्तरीय विद्युत पुग्दैन । र, खपत बढ्न सक्दैन ।
सरकारले ‘घरायसी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर’ भनेर मात्र हुँदैन । भान्साका उपकरण प्रयोग गर्दा निरन्तर र चाहिने गुणस्तरको विद्युत उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन । यसो नहुँदासम्म घरायसी खपत बढ्ने सम्भावना छैन । यसका लागि फेरि पनि वितरण प्रणाली दरिलो हुनुपर्यो । सामान्य हावा–हुरी वा पानी पर्दा समेत तार जल्ने पड्किने वा आगो लाग्ने हुनु भएन ।
दोस्रो चरणमा विद्युतीय बस चलाउनुपर्यो । यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । यसले वातावरण स्वच्छ बनाउँछ । स्वच्छ मौसम हुनासाथ सहरी क्षेत्रमा चिसो बढ्छ र घरघरमा हिटर, एसी जस्ता उपकरण चल्छन् । यसबाट बिजुली खपत हुन्छ । वातावरण स्वच्छ हुनासाथ पर्यटन उद्योग फस्टाउँछ ।
नेपालले कार्बन घटाएबापत विश्व जलवायु कोषबाट आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले समेत दबाबकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा इपानले पनि विद्युत खपतको एजेन्डा बोक्नुपर्छ ।
जबसम्म औद्योगिक माग बढ्दैन तबसम्म ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत हुने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकासमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरिरहेको छ । एउटा उद्योगीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो अवस्थामा हजारौं मेगावाट विद्युत कसरी खपत होला ?
व्यापकरूपमा खपत बढाउन बिजुली सस्तो हुनुपर्यो । जब वस्तु उत्पादन बढी, माग कम र बजार साँघुरो हुन्छ तब बढी सामान बेच्न वा खपत गराउन मूल्य सस्तो हुनुपर्छ । यो सामान्य माग र आपूर्तिको व्यवहारिक सिद्धान्त हो । हामीले बिजुली बढी खपत गरेर उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने मूल्य सस्तो हुनैपर्छ ।
महासंघ र सिएनआइले ‘उद्योगका लागि २० प्रतिशतसम्म बिजुली मूल्य कम हुनुपर्ने’ माग राखेका छन् । धागो, स्टिल, टेक्सटाइल, सिमेन्ट जस्ता बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगका लागि मूल्य सस्तो बनाइदिनुपर्यो, भारतमा जस्तो ।
१० वा २० प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि गर्ने प्राधिकरणको योजनाले हामी उल्टो बाटोतिर लाग्छौं । समग्र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन घटेर आम्दानी वा नाफा कम भइरहेको बेलामा प्राधिकरणले पनि नाफा हेर्नु हुँदैन । त्यो सरकारी निकाय नै हो मूल्य घटाउनुपर्छ । साथै, निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।
उद्योगमा बोइलरहरू वैकल्पिक ऊर्जा (भुसा, कोइला, डिजेल) बाट चलिरहेका हुन्छन् । यी २४सै घन्टा चल्ने उद्योगमा गुणस्तरीय बिजुली जानुपर्यो । हजारौं मेगावाट खपत हुने फलामजन्य उद्योग आउनुपर्यो । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा ५ वा १० वर्षसम्म बिजुलीको मूल्य नगण्य राख्नुपर्छ ।
अर्को, विद्युत निर्यात वा अन्तरदेशीय व्यापारको योजना सँगसँगै लैजानुपर्छ । भारतसँग इनर्जी बैंकिङ वा अल्पकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न जरुरी छ । बर्खामा हामीलाई बढी हुँदा भारतलाई दिन सकियोस् र हिउँदमा यता कम हुँदा ल्याउन सकियोस् । भारतीय खुद्रा बजार जहाँ घन्टा–घन्टामा विद्युतको कारोबार वा किनबेच हुन्छ । त्यहाँ प्रवेश गर्ने आधार समेत तय गर्नुपर्छ ।
करिब साढे ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । ती निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले के गरिदिए यी आयोजनामा सजिलै लगानी आउला ?
एउटै काम गर्ने सरकारका अनेक निकाय छन् । सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्यो । सक्षम र असक्षम प्रवद्र्धक छुट्ट्याउने राज्यसँग हैसियत हुनुपर्यो । सक्षम प्रवर्द्धकलाई अनुमतिपत्र दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । खुट्टा तान्ने वा बाँध्ने नियम आउनु भएन । अनुमतिपत्र दिँदा जुन नियम छ, पूरा हुँदासम्म त्यही लागू हुनुपर्यो ।
हरेक दिन वा सरकारपिच्छे नयाँ नियम लादेर प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गर्नु भएन । प्रवर्द्धक अदालतसम्म धाउने बाटो बनाउनु हुँदैन । प्रवर्द्धक आयोजना बनाउन आएको हुन्छ, सरकारसँग लडेर मुद्दा मामिला गर्न होइन । साथै, वन, वातावरण, भूमि र प्रसारण लाइनका काम राज्यका तत्तत्का नियकाले गरिदिए जलविद्युतमा लगानी आउने आधार तयार हुन्छ ।
कतिपय प्रवर्द्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर पनि निर्माण सुरु गरिरहेका हुँदैनन् । स्वपुँजी अभावले आयोजना होल्ड गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खोसेर पुँजी लगाउन सक्नेलाई दिनुपर्यो । यो काम विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न ढिलो गर्यो वा ऐन–नियम पालना गरेन वा उपभोक्तामा असर पर्ने अवस्था उत्पन्न भए केही समयका लागि सरकारले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ । भविष्यमा आउने लगानीलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यसको असर कतिसम्म पर्छ भनेर अहिले नै सामान्य विश्लेषण गर्नु उचित नहोला । यद्यपि, त्यसरी ऐन ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो पूर्णतः नियन्त्रणमुखी छ । हिजो बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थियो । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएर सुधार गरेकै हो । जलविद्युतमा पनि दुई–चार जना बदमासलाई त कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, कब्जा गर्ने बदनियतको नियम आउनुभएन ।